Taariikh nololeedka - Sen. Sharon Nelson - Washington State Senate Democrats
Taariikh nololeedka sdcadmin
Sharon waxay markeedii labaad ka shaqaynaysaa golaha Senate-ka iyadoo wakiil ka ah Degmada 34-aad, taas oo ay ku jiraan qayb ka mid ah Burien, North Highline, Vashon iyo Jasiiradaha Maury, iyo Galbeedka Seattle. Waxay hore uga shaqaysay Golaha Waliillada laga bilaabo 2007. Waxa loo doortay golaha Senate-ka 2010 oo waxay faceedu u doorteen hoggaamiyaha golaha Senate-ka xisbiga Dimuqraadiga gudaha 2014.
Bulaacad ka xumaatay gurigeeda ayaa waxa ay u hoggaamisay 1996 siyaasadda iyo firfircoonida shacabnimo, oo sababaysa ilaalinta biilka macmiilka kaas oo si guul leh looga dhigay sharci. Ka aasaase madaxwaye ahaan Dhawritaanka Jasiiradaheena iyo laba jeer oo ay ahayd Xubin Golaha Gobolka, Sharon waxay ahayd hoggaamiyaha la dagaalanka deegaanka in si guul leh looga hortago qodista macdanta Jasiiradda Maury 2010.
Sharon sidoo kale waxay ahayd Madaxa Shaqaalaha ee Degmada King ee xubinta golaha sharci dejinta Dow Constantine, halkaas oo ay si ballaadhan uga shaqaysay arrimaha siyaasadda dawladda, oo ku jirto sharciga isticmaalka dhulka ee kala duwan.
Kahor intii aanay u shaqayn Golaha Degmada, Sharon waxay kaga shaqaysay Gudoomiye Kuxigeen ahaan Bangiga Seafirst.
Iyadu waxa ay ku noolayd Jasiiradda Maury ilaa 1994 iyada iyo ninkeeda John. Sharon iyo John waxay leeyihiin laba gabdhood oo koray, Amy iyo Lyssa Ann, oo waxay la noolyihiin eygooda, Abby.